Ndị na -emepụta Komatsu | China Komatsu Ndị na -ebubata ya & ụlọ ọrụ
205-70-19570 PC200 dochie nha nha nke bọket maka Komatsu excavator machine
205-70-19570 PC200 ezé ọkọlọtọ ịwụ, nkedo na ịkpụpụta usoro mmepụta abụọ dị iche iche, afọ ojuju ndị ahịa chọrọ. Ọdịdị dị larịị na nke na-eguzogide, dochie nke ọma maka ndụmọdụ Komatsu PC200. Nrụpụta Aili bụ ọkachamara GET na -arụpụta akụkụ ahụ mapụtara site na 1980, 100% jide n'aka na ịdị mma yana mgbe ọrụ ahịa gachara.
ntụtụ nha nha 09244-02516 maka onye na-ebu WA380 excavator PC300 D85 ripper eze
09244-02516 175-78-21810 ntụtụ ezé maka onye na-ebugharị WA350 WA380 WA400, maka mkpọchi bọket excavator na ihe nkwụnye bọket. Agafere ọgwụgwọ okpomọkụ, ezi mma na ọrụ life.Aili rụpụta malitere mgbatị na ibe ya site na 1980.
Nkedo ụlọ nrụpụta ihe nrụpụta ụlọ maka igwe PC200 205-70-19570 TL
205-70-19570TL ezé ịwụ maka Komatsu PC200 excavators. TL ezé ịwụ ọzọ dị nkọ, nke ejiri ọrụ rụọ na ebe Ngwuputa na Ice, nwere ihe nrụpụta igwe siri ike. E guzobere nrụpụta Aili na 1980, mgbe afọ 40 nyocha na mmepe, ụdị Aili abụrụla ụdị ama ama n'ụwa.
Onye na -egwupụta bọket na -enye ndụmọdụ akụkụ PC60 sitere na nrụpụta Aili
Aili rụpụtara ndụmọdụ ịwụ PC60 Excavator ịwụ akụkụ, dochie igwe Komatsu PC60. Nwee ọkọlọtọ, okwute, otu ọnụ, RCX, RCK na ụdị ndị ọzọ. Nwere Ceramic Wax furu efu na ahịrị mmepụta ezé. Nrụpụta Aili bụ onye na -eweta ngwaahịa ama ama ama ama sitere na 2014, ogo na mgbe ọrụ ahịa nwere nkwa.
205-70-19570 PC200RC ROCK ezé ịwụ dochie Komatsu excavator
205-70-19570RC PC200RC ROCK ezé ịwụ dochie Komatsu excavator, yana ngwa igwe. Aili tinyere onwe ya na mpaghara GET Spare parts Casting and Forging area 40 afọ, na -ebupu ya karịa mba 100. Aili na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-anọ ogologo oge na China.
Bọketị PC300 excavator nwere ụdị okwute stardard
Bọketị PC300 Bucket Excavator Hydraulic Standard Rock bọket sitere na nrụpụta Aili kemgbe 1980, a na -ekwe nkwa ịdị mma na ọrụ.
Bọketị PC200 ọkọlọtọ okwute excavator sitere na nrụpụta China
1.0M3 PC200 excavator nnukwu ọrụ ịwụ nwere nnukwu mma manufacture Jiangxi Aili rụpụtara kemgbe 1980, bupu na ihe karịrị mba 100. Na -elepụ anya na nleta gị.